रानीले काटेको ढुंगा ! पत्त्याउनु हुन्छ ?
byShyam Rana magar - April 12, 2021
यो फोटोमा देखिएको ढुंगा रानीले काटेको रे !
सुन्दा अनौठो लाग्छ । तर, आँखालाई विश्वास मान्न गाह्रो छैन त । यो रानीले काटेको ढुंगा हो । तर किम्बदन्तिमा ।
उहिले जमानामा भुरेटाकुरे राजाको पालामा रानीले तरबार प्रहार गर्दा यो ढुंगा छिनाएकी थिइन् रे ! कुन्नी के कुरामा हो रिस उठ्दा रानीले तरबार उठाउदा ढुंगा दुई टुक्रा भएछ । अहिले मलाई सुनाउन भै राछ । गुल्मी रुरु क्षेत्र गाउँ पालिकामा पर्ने यो ऐतिहासिक ढुंगा आश्चर्यजनक छैन त !
युट्युबमा `सेभेन्टिन अमाजिङ रक्स इन वल्ड´ टाइटलमा एउटा भिडियो अपलोड गरिएको छ । जुन भिडियो समावेश भएका १७ आश्चर्य पार्ने ढुंगा भन्दा यो ढुंगा कम्तिको छैन । विदेशीहरुले यसैलाई आफ्नो माटोको प्रचार गर्ने माध्यम बनाएका छन् । हाम्रा सम्बन्धित निकायले पनि यसतर्फ ध्यान दिए हुने ।
कमसेकम मेरो दुरको गाउँको सानै सहि ठुलै प्रचार हुन्थ्यो ।